Famantarana ny kamboty amin'ny zazakely
Tsy misy renim-pianakaviana iray tsy manan-kery eo amin'ny toe-draharaha rehefa latsaka ny zazakely ary mandentika ny lohany. Matetika ny ankizy no mijaly noho ny tsy fanekena ny ray aman-dreny. Rehefa manomboka mikorontana ilay zazakely, dia ilaina ny mijery azy tsy misy herim-po, satria na dia ny fialana vetivety tsy misy atiny aza dia mety hitarika ho amin'ny ratra be.
Matetika, noho ny fipoahana tamin'ny loha tamin'ny ankizy kely dia misy fikoropahana. Soa ihany fa tsy ny herisetra rehetra no miaraka aminy. Mba hanombanana ny filana fitsaboana haingana any amin'ny toeram-pitsaboana iray, ny ray aman-dreny dia mila mahafantatra ireo marika fehiloha amin'ny zazakely, izay holazainay amin'ny lahatsoratrao.
Ny soritr'aretin'ny kamboty amin'ny zaza
Ny fisavoritahana ao amin'ny zazakely dia azo faritana amin'ny fisian'ireo soritr'aretina manaraka:
fisamborana matetika sy be dia be taorian'ny sakafo;
fanakanana ny hoditra;
mamoaka loharano iray;
fanirian-dratsy ary tebiteby be loatra;
Nystagmus - fihetsika tsy miangatra amin'ny maso sy ny tsy fahafahana mifantoka amin'ny fomba fijery.
Mety ho malemy be koa ny lohan'ilay zazakely, saingy tsy afaka hanazava izany aminao ilay zazakely. Indraindray ny ankizy dia afaka manohina ny lohany amin'ny penina, ka mampiseho izay toerana mampahory azy.
Ny zaza ao an-kibo dia tsy mahatsiaro tena rehefa misy ny atidoha. Ankoatra izany, ao anatin'ny ora vitsivitsy izy ireo dia afaka mitondra tena araka ny mahazatra. Izany no antony, rehefa tapitra na miseho ny lohanao, dia zava-dehibe ny mandinika ny volombava mandritra ny fotoana fohy, satria mety hipoitra ny soritr'aretina.
Raha misy reny tanora mikorontan-tsaina momba ny toe-piainan'ny zaza dia mila miantso "ambulance" ianao na mankany amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra. Ireo dokotera mahay dia hanao fitiliana amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny ati-doha amin'ny ati-doha, dia afaka mametraka ny diagnostika marina ary mamaritra ny filana fitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana.
Ny ankizy iray dia nanasitrana iray volana - inona no tokony hatao?
Ampitomboin'ny sela fotsy ny urine ny zaza - ny antony
Protargol amin'ny adenoids
Feno amin'ny rantsantànan'ny ankizy
Azonao atao ve ny mandro-bolo?
Ny otisin'ny ankizy
Sakafo eo ambany maso iray
Gingivitis amin'ny ankizy
Noho ny fitsaboana ny zaza amin'ny marika voalohany amin'ny hatsiaka?
Fenistil gel ho an'ny ankizy
Ahoana ny fomba ampianarana ankizy iray hanambaniana?
Ahoana ny famonoana demony iray?
Kitapo fiarovana amin'ny milina
Noho ny fitsaboana cystitis amin'ny vehivavy - fanafody
Aiza no tsy mendrika hankalaza ny taom-baovao?
Ahoana ny fomba hanesorana ny fanosihosena mandritra ny fitondrana vohoka?
Sotro avy amin'ny holatra matevina
Ny mikononkonona amin'ny feon'ny olon-dehibe
Ny malefice: famantarana
Cheshin - antony
Ny biby kely indrindra
Chocolat fondant - recipe
Sakafom-boankazo voajanahary vao voapoizina - tsara sy ratsy
Ny fitaovam-pandrefesana dia fitaovana mendrika ho an'ny implant
Ahoana no hananana tigra?
Ny fofona amin'ny koveta maina ho an'ny ankizy